‘शशांक कोइरालाले कतै सुरक्षित क्षेत्र खोजेर चुनाव लड्नु पर्छ’- तिलक सापकोटा :: NepalPlus
नेपालप्लस संवाददाता / नवलपुर२०७९ वैशाख २८ गते १७:४८
अहिले स्थानिय निकायमा दुई खाले गर्मी चढेको छ । स्थानिय निकाय सँग सँगै केही जिल्ला वा क्षेत्रहरुमा केन्द्रिय र प्रदेशका लागि पनि भित्र भित्रै लविङको तातो शुरु भएको छ । नवलपुर क्षेत्र नम्बर एकमा ३ पटक सम्म संसदिय निर्वाचन जितिसकेका बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले चौथो पटक मैदानमा उत्रिने घोषणा गरेका छन । तर क्षेत्रका कार्यकर्ता र पुराना नेताहरुको सोच भने फरक छ । स्थानिय निर्वाचन चलिरहँदा कोइराला एक पटक गैंडाकोट नगरपालिकाको चुनाव प्रचारमा आए पनि । तर केही घण्टा झुलुक्क झुल्किएर फर्किए । कुनै बेला नेपाली कांग्रेसको जिल्ला समितिलाई केन्द्रसम्म डोर्‍याएका पुराना नेता तिलक प्रसाद सापकोटा धेरै कुराहरुमा असन्तुष्ट छन । सापकोटाले १५ वर्ष अघि कोइरालाको हात समातेर जिल्लामा ल्याएका थिए । अहिले उनै सापकोटा निरास भएका छन, कोइरालादेखि । सुर्यभक्त अधिकारी र आफुले मिलेर गरेको जिल्लाको संगठन तहसनहस भएको उनलाई भित्रै देखी थाहा छ । तर आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र उमेरका कारण दौडाहमा आउन नसकेका सापकोटा भन्छन – संगठन भित्र अब यो अनुशासन रहेन । अहिले स्थानिय निर्वाचन समापन हुने तरखरमा छ । स्थानिय निर्वाचनको सेरोफेरो लगायत आगामी संसदिय निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर सापकोटासँग गरिएको कुराकानीको सार-
अहिले कांग्रेस पार्टीको गठवन्धनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
गठवन्धनको बारेमा मलाई के लाग्छ भने सरकार बनाउँदा अपुग भए, सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भए गठवन्धन गर्नु पर्दछ । अहिलेको चुनावमा वार्ड स्तरसम्म गठवन्धन गरेर जानु कुनै पनि पार्टीको हितमा छैन । यसले कसैको आत्मसम्मान माथि उठाउन सक्दैन । किनभने हामीले आफ्नै मतले जित्यौं भन्ने गर्व रहँदैन । अर्को कुरा यसरी गठवन्धन गर्दा प्रजातान्त्रिक मुल्य मान्यता धराशायी हुँदै जान्छन । कार्यकर्तामा निरासा छाउँछ । जस्तो अहिले देखिएको छ । हेर्नुस न जताततै केन्द्रिय निर्देशनको अवज्ञा भएको छ । यस्ता खालका निर्णय गर्दा केन्द्रिय समितिमा रहने साथीहरुले क्षणिक स्वार्थ र दम्भलाई त्याग्नु पर्ने हो, भएन ।
अब काग्रेसको अवस्था कस्तो होला त ?
अहिले बाहिर हेर्दा नेपाली कांग्रेस नै गत स्थानिय निर्वाचन भन्दा गतिलो अवस्थामा आउँछ । तर यसरी नै केन्द्रिय निर्देशनहरु कार्यकर्ताहरुमा लाद्न थालियो भने नेपाली कांग्रेस केही वर्षमै एकादेशको कथा हुन्छ ।
तपाईं लामो समयसम्म अहिलेका सभापती देउवासँग विभिन्न समितिहरुमा रहेर काम गर्नु भयो । अहिले देउवाले जुन निर्णय थोपरे त्यो निर्णयले तपाईंलाई कस्तो महसुश भएको छ ?
शेरबहादुरजीले केही काम राम्रो पनि गर्नु भएको छ । त्यसका लागि उहाँ प्रशंसाको पात्र पनि हुनुहुन्छ । यो गठवन्धनको जुन कुरो आयो यो शेर बहादुरजीको मात्र नभएर केन्द्रिय कार्यसमिती नै दोषी छ । गठवन्धनका बारेमा केन्द्रले मात्रै निर्णय गर्ने कि जिल्ला गाउँसम्म परामर्श गर्ने कि केन्द्रले आफ्नो निर्णय लाद्ने | केन्द्रको आदेशले कार्यकर्ताको आत्ममा चोट लागेको छ ।
देउवाले भनेका छन त, म त्यत्रो बहुमतको सभापति हो मैले जे भन्छु त्यही हाम्रो निर्णय हो !
उहाँले बहुमतले जित्नुभयो त्यो कुनै अर्को प्रसंग थियो । पार्टी सभापति बनाउने कुरामा उहाँलाई हामीले विश्वास गर्‍यौं । अहिले पनि विश्वास छ । तर अहिले जुन गठवन्धन गरिएको छ त्यसका लागि न त हामीले उहाँलाई सभापति बनाएको न केन्द्रिय समितिमा पुग्ने साथीहरुलाई हामीहरुले पठाएको हो ।
तपाईंको आफ्नो गैंडाकोट नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको अवस्था कस्तो छ ?
हामी एकदम राम्रो अवस्थामा छौं । खासमा भन्ने हो भने यहाँँ हामीलाई कसैले पराजित गर्न अहिलेको अवस्थामा असम्भव छ ।
तपाईंहरुले लामो समय सँगै काम गरेका ब्यक्ती मदनभक्त अधिकारी मेयरका प्रत्यासी छन । सम्भावना कस्तो छ ?
आधुनिक गैंडाकोटले मदनभक्तलाई मेयरका रुपमा पाउनु हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो । अब उहाँले आफुले गरेका प्रतिवद्दता पुरा गर्नुपर्दछ । सुनौलो गैंडाकोट बनाउने कुरामा अघी पक्कै पनि बढ्नुहुनेछ । यसले उहाँको ईतिहास त लेखिन्छ नै, सूर्यभक्त अधिकारीजी प्रती पनि ठुलो श्रद्दान्जली हुन्छ ।
जित्नुहुन्छ त मदनभक्तजीले ?
यो सोध्ने प्रश्न नै होइन । यो नगरपालिकामा कांग्रेसको विकल्प नै छैन ।
पाँच वर्ष अघि त हारेको हो । अहिले कसरी जित्छ ?
त्यो बेला र अहिलेको महौलमा आकाश जमिनको फरक छ । पहिले र अहिलेको तुलनामा एमाले धेरै बदनाम छ । ल हेर्नुस कहिले उनिहरुले आफूलाई धर्म निरपेक्षताको अनुयायी भन्छन कहिले मुर्ती बनाउँदै हिंड्छन । कहिले क्रिश्चियनहरु सँग मिल्छन । चरित्रको कुरा हो नि जनताले बुझ्दैनन र ?
जे कुरा भने पनि नेपाली कांग्रेसको संगठन नै गतिलो छैन नवलपुरमा !
बितेको वर्षको अन्तरालमा कसैले पनि संगठन तर्फ ध्यान दिएको छैन । भगीनी संस्थाहरुलाई सकृय बनाउन सकिएको छैन । पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पनि अनुशासनको घेरामा राख्न सकिएन । सानातिना कुराहरुमा हामीले धेरै समय बितायौं । त्यसैले पनि संगठन गतिलो हुन सकेन ।
यो क्षेत्रका सांसद शशांक कोइरालाका कारणले पनि संगठन बिग्रेको हो भन्ने कतिको भनाइ छ नि ?
मैले धेरै कुरा उहाँलाई भनिसकेको छु । धेरै सुझावहरु दिएको छु । तर उहाँलाई ति सुझावहरु पचेनन । उहाँले केही मान्छेहरुको गुट बनाएर हिंड्नु भयो । निकै सानो गुट । त्यसले त्यागी कार्यकर्ताहरुले अपमानित भएको महशुस गरे । अर्को कुरा उहाँ यो क्षेत्रमा १५ वर्ष सांसद हुनुभयो । यो १५ वर्षमा उहाँले खासै यही काम गर्नु भयो भनेर देखाउने ठाउँँ छैन । मैले उहाँलाई शुरुवाती दिनमा भनेका र उहाँले प्रतिवद्दता ब्यक्त गरेका चार वटा कुरा हुन । एउटा पहाडी लोक मार्ग, अर्को नारायणीको किनारै किनार त्रिवेणी जोड्ने बाटो, नवलपुरमा ट्रमा सेन्टर र अन्तराष्ट्रिय खेल मैदान । खै त के गर्नु भयो ? हामीले त जनतालाई भन्यौं नि, यस्तो हुँदै छ जिल्ला भनेर । तर उहाँले त्यतातिर छुँदा पनि छुनु भएन । हामी जनताको नजरमा झुट्टा भयौं । अनी कसरी संगठन बलियो हुन्छ । उहाँ बीपी कोइरालाको सुपुत्र भएको हुनाले यो जिल्लाका सबैले सम्मानका साथ हेरे । मायाँ गरे । उहाँ सुध्रिने हो भने अझै पनि मायाँ गर्थे होला । उहाँ भरतपुर होटलमा बस्नुहुन्छ कार्यकर्तालाई भेट्नुहुन्न । उहाँ सुध्रिन सक्नु भएन । उहाँको शैलीसँग कोही पनि सन्तुष्ट छैनन ।
उहाँका कारणले ध्वस्त भएछ त कांग्रेसको संगठन ?
उनको मात्रै भन्दा पनि उनका पछी लागेर हिंड्नेहरुका कारण पनि दोषी छन ।
नेपाली कांग्रेसको किल्ला भनिएको यो क्षेत्रमा अहिले गैंडाकोट जस्तो सुर्यभक्त अधिकारी र तपाईंले संगठन गरेको गैंडाकोट मै चुनाव हारिन्छ कि क्या हो भन्ने अवस्था आएको छ । भने पछी कती नाजुक भएछ त अवस्था ?
त्रास छ, हामी आफैंबाट त्रासको वातावरण बनाइएको हो । तर पनि हामी चुनाव हार्दैनौं । यहाँँका जनता मजबुत छन । संकटकालिन अवस्थामा शिविर चलाएका जनता हुन । संकटका बेला पार्टी बच्चाएका जनता हुन । त्यसैले केही डर छैन । हामी मजबुत छौं ।
तपाईं र सूर्यभक्त अधिकारी लगायतका ब्यक्तिहरुले निकै संघर्ष गरेर बनाएको संगठन कहाँनेर बिग्रियो ? कसले बिगार्‍यो ?
त्यो बेलाको संगठनले अहिले पनि काम गरिरहेको छ । कसले बिगार्‍यो भन्ने कुरामा केही दोष मैले पनि लिनु पर्दछ । तर नेतृत्वले बढी जिम्मा लिनुपर्छ । कृष्णचन्द्रजी ४ नम्बर र २ नम्बरबाट चुनाव लड्नु भयो । तर यहाँँ १ नम्बर क्षेत्रमा यहाँँका जनताले जिताए । मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिलेको अवस्थामा बिकास निर्माणमा उहाँको कार्यशैली निकै साकारात्मक छ । उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ । सकारात्मक हुनुहुन्छ त्यो नै ठूलो कुरा हो ।
अहिले विभिन्न कारणले शशांक कोइरालाको आलोचना भएको छ । उनले फेरी यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने घोषणा गर्नु भएको छ, फेरि पनि चुनाव जिताएर पठाउने ?
उहाँ फेरि पनि यहिंबाट चुनाव लड्नुभयो भने अपमानित हुनुहुन्छ । उहाँ अपमानित भएर जानुभयो भने हामीलाई पनि राम्रो लाग्दैन । त्यसैले उहाँले कतै सुरक्षित क्षेत्र खोजेर चुनाव लड्नु पर्दछ । उहाँले पक्कै पनि त्यो कुरा विचार गर्नुहुन्छ ।